MX-16: zita nyowani rekuwedzera kune runyorwa rwe distros | Linux Vakapindwa muropa
MX-16: zita idzva rekuwedzera kune runyorwa rwe distros
Iko kune kazhinji nguva dzose kutaura kwekuzivikanwa kunozivikanwa, senge Debian, openSUSE, Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, Fedora, nezvimwe, asi hazvikuvadze kutsvaga iyo huru repertoire yezvipo zviripo zvishoma nezvishoma kutora zvimwe distros kuti Ivo vakavanzwa zvakanyanya, uye nekuda kwechikonzero ichocho havana kunyanya kuipa, kunyange iri nyaya yekuravira. Nguva ino tauya nayo MX-16, izvo zvinokufadza zvirokwazvo kana iwe waifarira mamwe mapurojekiti senge MEPIS, kana AntiX, sezvo MX Linux inomuka sekubatana kwevagadziri vese.
Iwo mavambo eMX-16 chakavanzika, zvirinani kwandiri, uye ini handizive kwavanobva (zvechokwadi 16 ndiyo vhezheni yekupedzisira yakaburitswa muna Zvita 2016, saka haisi chirongwa chitsva). Asi ichi ndicho chidiki zvacho, kubvira paunoongorora kugovera unoona zvinhu zvakati wandei. Chinhu chekutanga kutaura icho mushure dzikisa ISO 64-bit ine saizi inofungidzirwa ye1.2GB, tinogona kuyedza muLive mode kana kuiisa pakombuta yedu kana muchina chaiwo.
Iti iyo kernel ndeye Linux 4.7.0 uye iyo yakasarudzika desktop nharaunda iyo inounza iXfce mune yayo vhezheni 4.12. Naizvozvo haisi iyo inorema distro, kunyangwe isiri yeyakareruka futi. Kana isu tikaramba tichiongorora, tinoona zvishoma zvinovhiringidza mavara uye mafonti dzimwe nguva anova asina kujeka, maviri asina kunaka mashoko anopesana nekukwezva kwayo uye bhaa rayo kuruboshwe munzira yemubatanidzwa muUbuntu, panzvimbo pekuve munzvimbo yepazasi Iyo skrini Ivo zvakare vakapa yakasarudzika chaizvo kubata kune mamwe ma distros maererano neanoona nyaya.
Nekudaro, inounza zvakakwana mapakeji esoftware kugutsa ruzhinji rwevashandisi, inoona Hardware zvakanaka, iyo yekumisikidza haina kushata zvachose, uye sezvandambotaura, dhizaini yayo yakanaka kunyangwe iwo maviri akaremara andakaratidza mundima yapfuura. .. Uye pamusoro pezvose, ndinoda kusimbisa kuti inonetsa kwazvo distro uye yakatsiga, saka inokupa iwe mashoma matambudziko, muchidimbu kune yayo base, inova Debian.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » MX-16: zita idzva rekuwedzera kune runyorwa rwe distros